दिनभरी बसेर काम गर्नुहुन्छ ? यी ४ योग आसनले शरीरको कठोरता र दुखाइ हटाउनुहोस्
एजेन्सी । आजको युगमा जीवन व्यस्त हुन सक्छ, तर अझै पनि अधिकांश मानिसहरू दिनभर एकै ठाउँमा बस्छन् र आफ्नो काम गर्छन् ।
यसले शरीरको हरेक अंगलाई हानि पुर्याउँछ । त्यसैले त्यस्ता ४ योगासनबारे जानकारी लिऔं जसको अभ्यास गरेर तपाई शरीरको दुखाइबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ ।
चटाईमा घुँडा टेक्नुहोस् ।
अब आफ्नो खुट्टा र खुट्टा सँगै छुनुहोस् ।
घुँडाहरू एकअर्काबाट सकेसम्म टाढा फैलाउनुहोस् ।
गहिरो सास लिनुहोस् र त्यसपछि यसलाई छोड्नुहोस् र अगाडि झुकाउनुहोस् ।
मेरुदण्ड र घाँटी एकदम सीधा राख्न प्रयास गर्नुहोस् ।
आफ्नो टाउको भुइँमा रोप्नुहोस् र घुँडाको रेखामा आफ्नो अगाडि आफ्नो हात फैलाउनुहोस् ।
एक–दुई मिनेटको लागि यो स्थितिमा रहनुहोस् ।
उठ्नुहोस् र आफ्नो खुट्टा र कम्मर सीधा गर्नुहोस् ।
सास लिनुहोस् र दुबै हात माथि उठाउनुहोस् ।
अब श्वास छोड्दा शरीरको माथिल्लो भागलाई जमिनको समानान्तर अगाडि ल्याउनुहोस् ।
घुँडा सीधा राख्नुहोस् र आसन होल्ड गर्नुहोस् ।
पाँच–दश सेकेन्डको लागि यो स्थितिमा रहनुहोस् र यसलाई दुई पटक दोहोर्याउनुहोस् ।
३. वीर भद्रासन
खुट्टाहरू सँगै जोड्नुहोस्, पछाडि सीधा राख्नुहोस् र चिउँडोलाई थोरै उठाउनुहोस् ।
दुवै हात छेउमा राख्नुहोस् र आफ्नो सन्तुलन कायम राख्नुहोस् ।
बायाँ खुट्टा लगभग ४ फिट अगाडि ल्याउनुहोस् ।
अब बायाँ घुँडा झुकाउनुहोस् र लङ्ग स्थितिमा आउनुहोस् ।
आफ्नो पछाडि दाहिने खुट्टा पाइला टेक्नुहोस् र दाहिने एड़ीलाई लगभग ४५ डिग्री भित्र घुमाउनुहोस् ।
गहिरो सास लिनुहोस् र दुबै हातहरू टाउकोको ठीक माथि उठाउनुहोस् र हत्केलाहरू जोड्नुहोस् ।
उठ्नुहोस् र खुट्टा र कम्मर सीधा गर्नुहोस् ।
हत्केलाहरूलाई जोडेर लक गर्नुहोस् ।
अब गहिरो सास लिनुहोस् र आफ्नो हात माथि उठाउनुहोस् ।
हत्केलाहरू बाहिर राख्नुहोस् र शरीरलाई माथितिर तान्नुहोस् ।
१० सेकेन्डसम्म यस आसनमा बसेर २–३ पटक आसन दोहोर्याउनुहोस् ।